पुर्वाधार « Clickmandu
गलकोट । बिहीबार रातको ठिक १२ बजेको थियो । कालीगण्डकी किनारमा रहेको राजमार्ग पोखरा-मालढुङ्गा र मालढुङ्गा-बेनी सडकमा सवारी गुड्न बन्द भइसकेका थिए । कालीगण्डकी आफ्नै बेगले बगिरेहको थियो, जताततै सुनसान
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित रकमको ९७.३५ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको बजेट सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको श्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको
काठमाडौं । राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने कान्ती लोकपथको वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भए पनि तत्काल सञ्चालनमा आउने देखिएको छैन । कान्ती लोकपथ निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च
मधेशको समृद्धिको आधार बन्दै हुलाकी राजमार्गको ‘फिदर रोड’
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका मुख्य र सहायक सडक तराई–मधेश क्षेत्रको समृद्धिके आधार बन्न थालेका छन् । पूरै आयोजना सम्पन्न भए पनि राजमार्ग र सहायक सडक (फिदर रोड)ले
निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्माण व्यवसायी विना विकासका काम सम्भव नभएकाले व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बिहीबार भेट्दै
स्मार्ट सहरका लागि छुट्याइएको ११ अर्ब बजेट अर्थले रोक्यो
काठमाडौं । सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा स्मार्ट सहरका लागि ११ अर्ब बराबरको वहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले गत
काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सोचेजति भएन प्रगति
काठमाडौं । बुङ्मति र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरुको सम्पदामा क्षति पुग्ने र उठीबास लाग्ने भन्दै
काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सोचेजति भएन प्रगति
काठमाडौं । बुङमति र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरुको सम्पदामा क्षति पुग्ने र उठीबास लाग्ने
चक्रपथ विस्तारः महाराजगञ्ज खण्डलाई तत्काल नचलाइने, कलंकी-धोविखोलामा डिभाइडर राखिने
काठमाडौं । चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला खण्डमा पर्ने महाराजगञ्ज खण्डलाई नचलाई विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला निर्माण गर्न लागिएको छ । महाराजगञ्ज
गलकोट । बिहीबार रातको ठिक १२ बजेको थियो । कालीगण्डकी किनारमा रहेको राजमार्ग पोखरा-मालढुङ्गा र
आयकरमा सीएसआर खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था किन कार्यान्वयन गर्दैन सरकार ?
काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ (४) ले ‘व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि
अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलमा विवाद, प्राधिकरणका बदमासी कस्ले हेर्ने ?
काठमाडौं । झण्डै ५ वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख विषय हो- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको